Mareykanka oo weerar ku beegsaday Al Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo weerar ku beegsaday Al Shabaab
War qoraal ah oo kasoo baxay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaarada Afrika ee loo yaqaano (Africom) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay 5-tii Bishaan duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka Tooratoorow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose,isla markaana ay la beegsadeen saldhigyo ay lahaayeen Shabaab.
“Duqeyntaas dhinaca cirka ah waa mid aan ku taageereeyno dowladda Soomaaliya,si ay ula dagaalanto Al-Shabaab,isla markaana ay u wiiqanto awoodooda,waxaana ku dilnay saddex ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayuu yiri Agaasimaha dhinaca Ammaanka u qaabilsan Afrikom Qaarada Afrika Maj. Gen. Gregg Olson.
Maamulka Hir-Shabeelle oo ka hadlay Dagaalkii duleedka Balcad
US air raid kills 3 Al Shabaab in Somalia